မိမိရဲ့ဓါတ်ပုံတွေကို Slideshow အဖြစ်လုပ်ဖို့ အဆင်ပြေတဲ့ ဆော့ဝဲလေးပါ...။ Effect တွေလဲတော်တော်များပါ ပါတယ်...။ အမြဲ တမ်း အသုံးပြုလို့ရအောင် Serial Key လဲထည့်ပေးထားပါတယ်...။ စိတ်ဝင်စားရင် ယူထားဗျာ...။
Posted by Peace at 9:16 AM0comments Links to this post
ဒီကောင်လေး ကတော့ ကျွန်တော် CD/ DVD Cover ပြုလုပ်လိုသူများအတွက်ပါ။ မိမိတို့ နှစ်သက်တဲ့ အတိုင်းပြုလုပ်ပေးနိုင် သလို၊ လေးထောင့် အခွေ Cover ကိုလည်းပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သူ့မှာ ပါတဲ့ Template လေးတွေကို အသုံးမပြုပဲ မိမိစိတ်ကြိုက်အသစ်ကစပြီး ပြုလုပ်ပေးလို့လဲရပါတယ်။ သူ့အတွက် အထဲမှာ Keygen လေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်။ Name ကိုတော့ မိမိတို့စိတ်ကြိုက်ပေးပြီး Generate လုပ်ပေး ရင် သူ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ Key လေးရလာပါမယ်။ ထည့်ပေးလိုက်ရင်အဆင်ပြေပါပြီ။
ကျွန်တော် အောက်မှာ နှစ်နေရာခွဲတင်ပေးထား ပါတယ်။ အဆင်ပြေမယ့်လင့်ခ်လေးကနေ သာယူသွား လိုက်ပါဗျာ။
Downloading from multiupload
Posted by Peace at 10:27 PM0comments Links to this post
ကျွန်တော် ဒီကောင်လေးကို အစ်ကိုတစ်ယောက်ကလည်း Laptop ကနေပြီးတော့ Wifi ပြန်ရှယ်ပေးချင်တယ် ဆိုတာနဲ့ ဒီကောင်လေးကို Update လေးရှာပြီးတင်ပေးလိုက်တာပါ။ Desktop PC တွေမှာ တော့ သုံးလို့မရပါဘူး။ Laptop အတွက်သီးသန့်ပါ။ Wifi ရှယ်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ နှစ်သက်သလို Password ခံပြီး ရှယ်ပေးလို့ရပါတယ်။ သူ့အတွက် Crack ဖိုင်လေးပါ တစ်ခါတည်း ထည့်ပေးထားပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်က 8.69 MB ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်အောက်မှာ နှစ်နေရာခွဲတင်ပေးထား ပါတယ်။ အဆင်ပြေမယ့်လင့်ခ်လေးကနေသာယူသွားလိုက် ပါဗျာ။
Posted by Peace at 10:16 PM0comments Links to this post
DVD VCD အခွေထုတ်ချင်သောသူများအတွက်ဆော့ဝဲကောင်းလေးတစ်ခုပါ
DVD VCD အခွေ လုပ်ချင်သူများ ဒီဆော့ဝဲလေးရှိရင် အဆင်ပြေပါတယ် ၀ယ်ထားတဲ့ VCD အခွေထဲကနေ တစ်ပုဒ်ချင်း Selection လုပ် သီးသန့် လက်ရွေးစင်အခွေလေး တရုတ်သိုင်းကားတွေလိုပဲ Menu လေးနဲ့ကိုယ်ကြိုက်တာ အရင်ရွေးဖွင့်လို့ရအောင် လုပ်လို့ ရပါတယ် အဆင်ပြေသလို
ဥာဏ်ကောင်းသလို ဖန်တီးလို့ ရပါတယ် Nero7ကိုတော့ အတော်လေးသုံးဖြစ်ခဲ့တယ် နောက်ပေါ်လာတဲ့ Nero 8 Nero9 စုံနေတာပဲ အခွေလုပ်တာကဆော့ဝဲမသုံးလည်း BURN လို့ ရနေတာပဲ Window7 ဆိုလည်း အလိုလိုပါနေပီးသာ Window DVD Maker လည်းကောင်းပါတယ် သူက VCD တော့မရဘူး အခုတင်ပေးလိုက်တာက အစုံတော့ရတယ် Nero လောက်တော့ မကောင်းဘူး Nero က Photo Slide Show တွေဘာတွေ လုပ်ရတာ အတော်လေးအဆင်ပြေပါတယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စုံအောင် လေ့လာထားဖို့အခြေခံပညာသင် ၀ါသနာတူသူငယ်ချင်းတွေအတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.
Posted by Peace at 9:42 PM0comments Links to this post
Transform Windows7into Android 4.0
Window7ကနေ Google Android OS 4.0 ပုံစံပြောင်းရအောင် transformation pack နဲ့ပြောင်းရအောင်။Window7ကနေပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့ အတွက် 32 bit ရော 64 bit သုံးသူတွေ အဆင်ပြေအောင် တင်ထားပေးထားပါတယ်။လက်ရှိ window7ကနေ Google Android Os ကိုပြောင်းထားတဲ့ ပုံကို အောက်ကကြည့်ပါ။ဘာမှ လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ window7အလိုက် 32 bits ဆို 32 bits ဒေါင်းဆွဲပြီး install ပေးလိုက်ရုံပဲ။ပီးတာနဲ့ စက်ကို reboot or restart တောင်းလာလိမ့်မယ်/Resart ချပေးလိုက်ပါ။ချပေးလိုက်ပီးတာနဲ့ Welcome window7ကနေ Welcome Google Android OS ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်။ကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Download Link (32-bit)
Posted by Peace at 8:43 PM0comments Links to this post
Babylon Pro 9.0.1.5 and Patch ( English - Myanmar )
Languages ပေါင်း 75 ခုကျော်နဲ့ ဘာသာပြန်ဆိုပေးထားတယ်..၊word တစ်ခုကိုလည်း Oxford , longman , Wekipedia ,Dream စတဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ Dictionary အဖွင့်တွေနဲ့ ကြည့်လို့ ရတယ်၊
ပြီးတော့ မြန်မာလိုပါကြည့်လို့ ရသေးတယ်။ ကိုလိုချင်တဲ့ Language ကိုလည်းထပ်ပေါင်းလို့ ရပါသေးတယ်၊နောက်ဆုံးဗားရှင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဗားရှင်းတွေထက်ပိုပြီးတော့စုံလည်းစုံ/လှလည်းလှပါတယ်။
2 =Babylon setup ကို Run
3=Run ပီးခါနီးရင် Email တောင်းလိမ့်မယ် (ထည့်ပေးလိုက်)
4=ဖိုင်ထဲမှာ Patch.exe ဆိုတာရှိတယ် အဲ့ဒါနဲ့Babylon ကို Patch လုပ်။ ( အမြဲသုံးဖို့ အတွက်)
5=Padonma-English-myanmar Dictionary ဖိုင်လေးကို Run
( Run လို့ မရပါက ဖိုင်ပေါ် Right click ထောက်ပီး Open with ဆိုတဲ့နေရာမှ Babylon toolbar နဲ့Run)
6=Dictionary ကိုဖွင့် ၊ ပီးရင် အပေါ်နားလေးမှာ Language tabs ရှိတယ် မြန်မာဘာသာက other ဆိုတဲ့အမည်နဲ ရှိနေလိမ့်မယ် ။
ကိုလေ့လာနေတဲ့ Languages တွေကိုလွယ်လင့်တကူကြည့်လို့ ရအောင် Language Tabs ဘားပေါ်တင်ထားလိုက်ပေါ့။
( ဒါတော့ အနားကကြက်ခြေခက်လေးနှိပ်လိုက်၊
နိုင်ငံတွေကျလာလိမ့်မယ် ကိုယ်လေ့လာနေတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ Languages တွေကို Tick ကလေးပေးလိုက်ပေါ့၊
7=ပီးပီ၊ ဖတ်လို့ ရပီ။
( မြန်မာလိုကြည့်ချင်ရင် စာတစ်လုံးရိုက်ပီး Bar ပေါ်က Other ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါ မြန်မာပြန်ကျလာလိမ့်မယ်)
Posted by Peace at 8:55 PM0comments Links to this post
ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ Wedding Album Maker လေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အခုအသုံးမလိုပေမယ့် နောက် ပိုင်းတော့ အသုံးလိုလာမယ်ထင်ပါတယ်။ မိမိတို့ အသုံးပြုလို့တဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေကို မိမိတို့ နှစ်သက်တဲ့ သီချင်း တွေနဲ့ မိမိတို့ နှစ်သက်သလို တည်းဖြတ်ပြီးတစ်ခါတည်း အခွေထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုရတာလည်းလွယ်ပါတယ်။ သူ့အတွက် နာမည်နဲ့ Serial Key လေးကိုပါတစ်ခါတည်း ထည့်ပေးထား ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 23.71 MB ရှိပါတယ်။ အောက်မှာ ယူသွားလိုက်ပါဗျာ။
ကျွန်တော်နှစ်နေရာခွဲတင်ပေးထားပါတယ်။ အဆင်ပြေမယ့်လင့်ခ်လေး ကနေသာယူသွားလိုက်ပါဗျာ။
Posted by Peace at 8:46 PM0comments Links to this post
ဒီကောင်လေးကတော့ Memory Cleaner လေးပါ ..ကျွန်တော်တို့ တစ်နေ့နေ့ ကွန်ပျုတာကို အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ စက်စဖွင့်ပြီဆိုတာနဲ့ Application ပေါင်းစုံကို စပြီးလည်ပါတ်တော့ တာပါပဲ .. Application တွေကိုအသုံးပြုတာ များလာလို့ Memory ရဲ့ System Cache တွေများ လာတာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ မမြင်နိုင်တဲ့ အမှိုက်သရိုက်လေးတွေကို ဒီကောင်လေးနဲ့ ရှင်းပေးလို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် . အသုံးအပြု ရတာလည်း ဘာမှမခက်ခဲ ပါဘူး အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ ကောင်လေးကို Install လုပ်ပေးလိုက်ယုံပါပဲ .. ဒါဆိုရင် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ် .. လိုအပ်တဲ့ သူတွေကတော့ အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေသာ ဒေါင်းလော့ချသွား လိုက်ပါ ..
Posted by Peace at 8:42 PM0comments Links to this post
Windows7ISO x86 and x64 Official Direct Download Links ( Professional and Home Premium)
အခုကျနော်တင်ပေးမှာက 32-bit Windows7Home Premium x86 ISO, 64-bit Windows7Home Premium x64 ISO, 32-bit Windows7Professional x86 ISO, 64-bit Windows7Professional x64 ISO တွေဘဲဖြစ်ပြီး ဆိုဒ်တွေက 2GB အထက်ရှိပါတယ်.အသုံးပြုချင်တဲ့မိတ်ဆွေများ အောက်မှာ download ယူနိုင်ပါတယ်။
Posted by Peace at 8:45 PM0comments Links to this post
ဒ်ါလေးကတော့ ပုံနောက်ခံအလှပြင် ဆော်ဝဲလ်လေးပါ မိမိကြိုက်တဲ့ပုံကို ပြင်နိုင်သလောက်လှပါတယ် ..
မရောက်ဖူးတဲ့နိုင်ငံကို နောက်ခံထားပြီး ကိုပုံကိုရှေးမှာထားပြီ လုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရတာပေါ
ဒီမှာ ဒေါင်ယူပြီး ကလိလို့ရတာပေါ။
Posted by Peace at 10:03 PM0comments Links to this post
၀င်ဒိုးအသစ်တင်ပြီးရင် ဆော်ဝဲလ်တွေအများကြီး လိုက်ရှာနေရပါတယ် ဟိုဆိုဒ်မှာ သွားယူလိုက် ဒီဆိုဒ်မှာ လာယူလိုက်နဲ့ ပင်ပန်တယ်ပေါ တစ်နေရာ ထဲနဲ့ အစုံ ရှိတယ် အသုံးလိုရင်တော့ ဒီမှာ သွားရောက်ပြီ မိမိကြိုက်
တဲ့ ဆော်ဝဲလ် အမျိူးစားကို ကလစ်ပေးပြီ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်
Posted by Peace at 9:50 PM0comments Links to this post
၀င်ဒိုး XP ကို ၀င်ဒိုး7ထက်ပိုလန်းအောင်လုပ်မယ်
၀င်ဒိုး XP သုံးနေလို့ သူများတွေ ၀င်ဒိုး7သုံးနေတော့ ကိုလည်သုံးချင်တာပေါ မဟုတ်ဘူးလား ဟီးး
အားမငယ်ပါနဲ့ XP ကို ၀င်ဒိုး7ထက်တောင်ပိုမိုက်တယ် အပေါ်ကပြထားတဲ့ပုံကိုကြည့်လေ မိုက်တယ်မဟုတ်လား ဟီးးး ဒီဆော်ဝဲလ်ကိုဒေါင်းယူ ပြီ အသုံးပြုကြည့်ပါ လန်းလန်းထွက်သွားမယ် Folder တွေကအစ အကုန်လုံးပြောင်းလဲ သွားမည်ဖြစ်ပါတယ်...
Posted by Peace at 9:47 PM0comments Links to this post
Wi-Fi မပါတဲ့ PC တွေ Laptop တွေအတွက် Wi-Fi အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ FASt 150M
Wi-Fi မပါတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေ၊ လက်ပ်တော့တွေမှာ Wi-Fi အသုံးပြုလို့ရအောင် ပြုလုပ်ပေးမယ့် Fast 150M ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ Fast 150M ဟာ အကွာအဝေးမီတာ ၁၅၀အထိ အသုံးပြုနိုင်တဲ့အတွက် Wi-Fi Adaptor အဖြစ် အသုံးပြုရာမှာ ပိုမိုလွယ်ကူလျင်မြန်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Wi-Fi ကို အသုံးပြုပြီး အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ ကြားခံကိရိယာလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Destop တွေမှာပါ အသုံးပြုလို့ရတဲ့အတွက် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ကိရိယာလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Peace at 12:21 PM0comments Links to this post
Software တွေ Run ပြီးသွားရင် Restart မချချင်
ကျွန်တော်ကို ကြံကြံဖန်ဖန်မေးလို့ တင်ပြလိုက်တာပါ။ ကျွန်တော်တို့ တစ်ချို့ Software တွေ Install ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာ Windows နဲ့ တွဲမိအောင် ပြောရရင်း မိမိ Run တဲ့ Software Activated ဖြစ်အောင် Restart ချပေးရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေးမဲ့ အခုချက်ချင် မချချင်ဘူးဆိုရင် တစ်ချို့ Yes or No မေးပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင် Task Manage ကို (Ctrl+Alt+ Delete (or) Ctrl+Alt+Esc) နိုပ်ပြီ ခေါ်လိုက်ပါ။ ပြီရင် မိမိ Run ခဲ့တဲ့ Process ကို End Task ပေးလိုက်ရုံးပါဘဲ။ ဒါဆိုရင် Restart ချစရာမလိုတော့ပါဘူး။ ပြီရင် All Program ကနေ ပြန်ဖွင့်လိုက်ပေါ့။ ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ကြံကြံဖန်ဖန်မေးလို့ တင်လိုက်တာပါ။
Posted by Peace at 9:31 AM0comments Links to this post
Posted by Peace at 9:23 AM0comments Links to this post
ဖိုင်ဆိုဒ် အကြီးတွေ ခွဲထုတ်မယ် ပြန်ပေါင်းမယ်
ကျွန်တော် သူငယ်ချင်းက ပေးတဲ့ Software လေးပါ။ ကျွန်တော်ဆီမှာက JsSprit နဲ့သုံးနေပါတယ။် ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းက FileJS က ပိုကောင်းတယ်လို့ ပြောတာနဲ့ သူ့စီက တောင်းပြီ သုံးကြည့်တာ အတော်ကောင်းတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်လဲ JsScript Software ကိုတောင် မေ့သွားတယ်။ Blogger တွေအတွက် အတော် အသုံးဝင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ File Site ကြီးတဲ့ သီချင်းတွေ Video တွေ Software တွေ စာအုပ်တွေကို အပိုင်းပိုင်းခွဲတဲ့နေရာမှာ ဒီ Software က အတော် အသုံးတည့် လှပါတယ်။ ဒါကြောင့် လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးကိုပါ တင်ပြပေးပါမည်။ ကြိုက်တာ File အမျိုးအစား အားလုံးနည်းပါ ခွဲလို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် လိုအပ်မယ်ထင်လို့ တင်ပြပေးလိုက်တာပါ။
ကျွန်တော်တို့ မိမိတို့ ပိုင်းထားတဲ့ အပိုင်းလိုက်ကလေးတွေကို တစ်ဖိုင်တည်ဖြစ်အောင် Joining ကို click လိုက်ပါ။ ပြီရင် ကျွန်တော်တို့ Split လုပ်ထားတဲ့ အပိုင်းတွေထဲက ပထမဆုံးဖိုင်ကို The First input file မှာ မိမိတို့ ရွေးချယ်လိုက်ပါ။ output file မှာက Save မည့်ဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီရင်တော့ Join ကို click လိုက်ပါ။ ပြီးပါပြီ။ (သူငယ်ချင်း မောင်မောင်ကျော်ကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ )
Posted by Peace at 9:10 AM0comments Links to this post
Posted by Peace at 8:36 AM0comments Links to this post
BIOS Password ကို Remove လုပ်နိုင်ဖို့
BIOS password မေ့သွားခဲ့ရင် အဲ့ဒီ password ကို ဘယ်လိုပြန်ဖျက်မလဲဆိုတာ အရေးကြီးပါတယ် ။ သို့မဟုတ်ရင်တော့ Windows တင်ရတဲ့ အခါမှာ သူများစက် သွားတင်နေရတာ တော်တော် ဒုက္ခ ရောက်လှပါတယ်။ နောက်ပြီWindows ရဲ့ Password မေ့ခဲ့ရင်တော့ reset disk ဖန်တီးပြီ password ပြန်ခေါ်တာ၊ sade mode တို့ကနေ ပြန်ဖျက်နိုင်ပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီလို မေ့တဲ့အခါမှာ physically အားဖြင့် CMOS battery ကိုဖြုတ်ပြီ removing လုပ်တာတို့ စတဲ့ ကြားဖူးနားဝ တွေနဲ့ ဖြေရှင်းတာလဲ မရဘူး။ ဒါကြောင့် BIOS password မေ့လို စိတ်ညစ်နေရင် အောက်က PC CMOS cleaner က ဖြေရှင်းပေးပါလိမ့်မယ်.။ Free လဲဖြစ် ၊ အသုံးပြုရလဲ လွယ်ကူတာမို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။ မှုလဆိုဒ်ကိုပါ တခါတည် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အသေးစိတ်သိချင်က အဲ့ဒီမှာ သွားသာ လေ့လာ ဖတ်မှတ် ဒေါင်းလုပ်လုပ်ကျပေးတော့။
PC CMOS Cleaner Features:
1. Download ISO file by မှုလဆိုဒ်မှ အသေးစိတ်လေ့လာ ဒေါင်းရန်
5. Use PC CMOS Cleaner to finish the job.
Posted by Peace at 8:30 AM0comments Links to this post
Nero Burning ROM v11.0.12200.23.1000 | Full Version
အခု Nero Version 11 တင်ပေးလိုက်တယ်။ Full Version လဲဖြစ်တော့ ပိုပြီးအဆင်ပြေတာပေါ့။ လိုအပ်ရင်အလွယ်တကူ ဒေါင်းနိုင်အောင်လေ။
Posted by Peace at 10:51 PM0comments Links to this post
A-PDF Word To PDF Converter 4.7.0
Microsoft Word Format နှင့် ဖန်တီးထားသော Document File များကို PDF File အဖြစ် လွယ်ကူစွာ ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ Word To PDF Converter 4.7.0 ဖြစ်ပါတယ်။ Word File များကို Multiple Convert ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပြီး၊ Water Mark များ၊ Password များ၊ Page Number များ၊ Bookmark များနှင့် အခြား Properties များပါ ထည့်သွင်း Edit လုပ်၍ PDF အဖြစ်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ Microsoft Word Plug In ကိုပါတပြိုင်တည်း Install လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဆင်ပြေစွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် GPL GhostScript ကိုပါ Download လုပ်၍ Install လုပ်ပေးထားရပါမယ်။ Download လုပ်ပြီးလျှင် အောက်တွင်ပေးထားသော Seiral Key ကိုထည့်သွင်းခါ Register လုပ်၍ Full Version အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
Serial Key: BUQ93-XY49E-N3P86-EYWUS
A-PDF Word To PDF Converter 4.7.0 ကို Download လုပ်ရန်
Posted by Peace at 4:16 PM0comments Links to this post
Mac OS Widget များကို Window ပေါ်တွင် Run ပေးနိုင်သည့် Kludget Engine V0.9.9
Mac OS တွင်သာတွေ့ရမည်ဖြစ်သော Widgets များကို Window ပေါ်တွင် တင်ပေးနိုင်သည့် Kludget Engine V 0.9.9 ဖြစ်ပါတယ်။ Currency Converter, Mail Checker, Clock, Calendar, Notes, Google Widget, Youtube Video Widget စသည့် Widget တို့ကို Mac OS Style Design နှင့် Opacity , Grayscale စသော Effect များစုံလင်စွာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ 12.1 MB သာရှိပြီး Window အားလုံးမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Kludget Engine V0.9.9 ကို Download လုပ်ရန်
Posted by Peace at 4:14 PM0comments Links to this post
Windows7Essential Video Training
Windows7 Essential Training ကတော့ အခုမှ Windows7 အစအသုံးပြုသူများနှင့်
နောက် Windows7 ကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးချချင်သူများအတွက်အဆင်ပြေမယ့် Video Tutorials ဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုက်ကကြီးတော့ အားလုံး ၅ ပိုင်းခွဲပြီး တင်ပေးထားပါတယ်။
Linux Ubuntu Skin Pack For Windows 7
Linux ရဲ့ Ubuntu Skin Pack လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..Windows မှာတင် OS မျိုးစုံရဲ့ပုံစံလေးတွေသုံး
သူတွေအတွက်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာ..ဒီကောင်လေးက Skin Pack လေးပါ..Themes မဟုတ်ပါဘူး.Skin Pack ဆိုတာကဒီကောင်လေးရဲ့ Skin Pack လေးကို Install လုပ်ပေးလိုက်ယုံနဲ့ Logon ပုံစံတွေကအစပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်…သုံးရတာလဲပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ဆိုတော့အသုံးပြုချင်တဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေ
Posted by Peace at 8:47 PM0comments Links to this post
Posted by Peace at 11:38 AM0comments Links to this post
List of some features on Windows 8
Windows 8 မှာ ထူးခြားဆန်းသစ် တဲ့ features ပေါင်း ၃၀၀ လောက် ပါဝင်မယ်လို့ Microsoft က ပြော ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တီထွင်ထား တဲ့ features တွေကတော့ ၃၀၀ ထက်ကို ကျော်ပါတယ်တဲ့။
ဒါဆို ဘယ်လိုမျိုး features တွေ ပါဝင်မယ်ဆိုတာ မသိချင်ကြဘူးလား။
WinRumors က စာဖတ်သူတစ်ယောက်ကတော့ Microsoft ရဲ့ teaser silde ကို သွားဖတ်ပြီးတော့ Windows 8 မှာ ပါဝင်မယ့် features အခု ၃၀၀ လုံးကို ချရေးလာခဲ့ပါတယ်။ အသစ်အဆန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် တချို့တချို့သော features တွေကို နားမလည်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီတော့ လူအများသိလွယ်ပြီး အသုံးဝင်မယ့် features အနည်းငယ်ကို ဒီမှာဖော်ပြချင်ပါတယ်။
* All Day Battery
* Reliable Rollback
* Get My Printer Working Basic Functionality
* My Media Plays to Digital Media Receivers
* Enhanced File Explorer
* Auto-Suggest Search, History
* Gestures Manipulation
* Restore from USB Key
* Windows Update, Modern Update Experience
Features အခု ၃၀၀ စလုံးကို သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ link မှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Posted by Peace at 2:32 PM0comments Links to this post
ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးနဲ့ တစ်လုံး ကြား file တွေ ခဏခဏ ပြောင်းဖို့ ဆိုရင် dropbox ကအရမ်း အသုံးဝင် ပါတယ်။ ကွန်နက်ရှင် ကောင်းတယ် ဆိုရင် ဒီ software နဲ့တွဲပါတဲ့ free online file storage က USB Flash Drive တွေ မျိုးတုံး သွားအောင် လုပ်ကောင်း လုပ်နိုင် ပါတယ်။
Create account here: http://db.tt/xI9JxtY
အထက်ပါ link ကနေ dropbox account လုပ်ပြီး dropbox software ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်လို့ intstall ပြီးသွားရင် file တွေ share ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။ ကိုယ်အသုံးပြုချင်တဲ့ အခြားကွန်ပျူတာ တိုင်းမှာ လည်း dropbox software ကို install လုပ်ရပါ့မယ်။ တစ်ခြား online file storage software တွေကြား drobox ရဲ့ အားသာချက်က windows နဲ့ထပ်တူ interface ကိုသုံးထားခြင်းပါ။ Dropbox ကို install ပြီးတာနဲ့ windows ရဲ့ ပုံမှန် folder ပုံစံ dropbox folder တစ်ခု user account အောက်မှာပေါ်လာမှာပါ။ ကိုယ် share ချင်တဲ့ file ကို dropbox ထဲထည့်လိုက်တာနဲ့ dropbox setup လုပ်ထားတဲ့ အခြားကွန်ပျူတာ တိုင်းမှာအပြင် online ကကိုယ့် account မှာပါ file ကို access လုပ်နိုင်မှာပါ။ dropbox ထဲထည့်တယ်ဆိုတာက လည်း windows style နဲ့ drag & drop လုပ်ရုံတင်ပါ။ Dropbox ထဲက recent file တစ်ခုကိုမှားပြီး Shift+Delete လုပ်လိုက်မိရင်လည်း online dropbox account ကနေ Undo Delete ပြန်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ iPhone, iPad, iTouch နဲ့ android device တွေအတွက်လည်း dropbox app တွေရှိပါတယ်။
Posted by Peace at 2:26 PM0comments Links to this post
Linux OS အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး Video ဖြင့်လေ့လာရန်
Linux operating system ဇာတ်ကြောင်းကို ရှင်းပြထားတဲ့ documentary ဖြစ်ပါတယ်၊
ဖိုင်ဆိုက်ကတော့ 691.MB ရှိတယ်..Linux ကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်တာပါ။
part1 , part2 , part3 , part4 , part5 , part6 , part7 , part8
Posted by Peace at 10:10 AM0comments Links to this post
Home and Small Office Networking Video
Home and Small Office Networking | 637Mb
Network ကိုလေ့လာချင်သူများအတွက်အရမ်းကောင်းတဲ့VideoTutorials ဖြစ်ပါတယ်၊ သင့်ရဲ့အိမ်မှာဖြစ်စေ ရုံးမှာဖြစ်စေ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးထက်ပိုရှိပါသလား?ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ Network ချိတ်ထားဖို့လိုပါပြီNetwork ချိတ်ထားခြင်းအားဖြင့် ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးမှ ဖိုင်တွေကို နောက်ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးသို့ကူးယူချင်ရင်USBတွေCDတွေကိုသုံးစရာမလိုတော့ပါဘူးNetworkမှတဆင့်အားလုံးလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ် အသေးစိတ်လေ့လာချင်ရင်တော့ အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ကြပါခင်ဗျာ။
Posted by Peace at 10:07 AM0comments Links to this post
Ecodsoft Keylogger ဟာ သင့်မရှိသည့်အခိုက် သင့်ကွန်ပျူတာကို တစ်စုံတစ်ဦးက အသုံးပြုထားသည့် မှတ်တမ်း များအားလုံးကို ပြန်လည် စစ်ဆေးကြည့်ရှုနိုင်ပေသည်။ ကွန်ပျူတာရဲ့ နောက်ကွယ်မှ တိတ်တဆိတ် အလုပ်လုပ် နေပြီး ကွန်ပျူတာမှ လုပ်ဆောင်ချက် အားလုံးကို မှတ်သားပေးနေပါသည်။ ထို့ကြောင့် keylogger အသုံးပြုပြီး အခြားသူ များရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ကို ထိပါးစေမည့် အမူအကျင့်များအတွက် ရှောင်ကြဉ် သင့်ပါသည်။ နည်းပညာအရ ခြေတစ်လှမ်းနောက်မကျ စေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။
Posted by Peace at 1:26 PM0comments Links to this post
Installation With Password Protect Software
ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပြူတာမှာမည်သူ့ကိုမှ Software များကို Install လုပ်ခွင့်မပေးပဲ Installation Password ပေးကြရအောင်.
Full Version လေးဘဲပေးထားပါတယ်။အသုံးပြုရတာလွယ်ပါတယ် Install လုပ်လိုက်တာနဲ့ဘဲ သူ့ဖာသာသူ Installation Block လုပ်ပေးပြီးသားပါ၊၊အဆင်မပြေရင်မေးမြန်းနိုင်ပတယ်ဗျာ..အောက်က Link မှာယူကြပါ၊အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ..
Posted by Peace at 9:34 PM0comments Links to this post
CyberLink PowerDVD v11 ပါ..သုံးချင်သူများသုံးကြည့်လိုက်ပါ.
keygen ဖွင့် ပြီးတော့ Name နေရာမှာ ကို့နာမည်(ဒါမှမဟုတ်ရင်)တစ်ခုခု ရိုက်ထည့်
genrate ကို နှိပ်လိုက် serial number ပေါ်လာလိမ့်မယ်. license ထည့်တဲ့နေရာမှာ အခု ရိုက်ထားတဲ့ နာမည်နဲ့ serial number ထည့်လိုက်ရင် ရပြီ.
Download mirrorcreator | ifile.it | mediafire | zshare | ziddu
Posted by Peace at 5:56 PM0comments Links to this post
အရေးကြီးသောဖိုင်များကို Delete လုပ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်ဆော့ဝဲ
တစ်ကိုယ်ရေသုံးတဲ့ ကွန်ပျူတာမှာတော့ ကိုယ့်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ file တွေ၊ folder တွေကို သူများက ဖျက်သွားမှာကို ပူစရာ သိပ်ပြီး မလိုအပ်ပေမယ့်၊ အများသုံး ကွန်ပျူတာ၊ ရုံးသုံး ကွန်ပျူတာ တွေမှာတော့ ကိုယ့်ရဲ့ file, folder တွေကို delete လုပ်သွားခြင်းတွေ ကြုံရနိုင်ပါတယ်။ ဒီပြဿနာတွေက ကင်းဝေးအောင် software လေးတစ်ခုကို သုံးကြည့်ပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
Folder Protect ဆိုတဲ့ software က ကိုယ့်ရဲ့ file, folder တွေတင်မက drive တစ်ခုလုံးကိုပါ delete လုပ်ခြင်း၊ ဝင်ရောက် ပြင်ဆင်ခြင်းတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ folder protect မှာ no access, no delete, no visible, no write ဆိုပြီး လေးမျိုး ပါရှိပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူများ စမ်းကြည့်ချင်ရင် အောက်မှာ download link ပေးထားပါတယ်။ key ပါပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။
Folder Protect - Download (mediafire)
- Download (ifile.it)
Posted by Peace at 2:39 PM0comments Links to this post
Window 8 Transformation Pack v1 Released..( New)
Window 8 ပုံစံလေးပါသုံးချင်ရင်အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ပါ..
Download Window 8Transformation Pack v1.0
.NET Framework 2.0 - Required for system files transformation in Windows XP/Server 2003 x64 Editions.
.NET Framework 4.0 - Required for Windows 8 features like User Tile/Metro UI Desktop/Auto-colorization.
Posted by Peace at 2:20 PM0comments Links to this post
Posted by Peace at 9:44 PM0comments Links to this post
Easy DVD Creator v2.4.3 . Full Version
DVD movie creator လုပ်နိုင်တဲ့ဆော့ဝဲလေး။ ပြုလုပ်ရတာ လဲအတော်လွယ်ပါတယ်။
Driver Genius 10.0.0.761 Final (With New License Key) | Full Version
Posted by Peace at 9:48 PM0comments Links to this post